October 2013 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
Android Phone က Incoming & Outgoing Network Connec...
Flag Animation ( ဓါတ်ပုံတွေကို လေထဲမှာ လွှင့်မယ် )
himon UniMon Font & keyboard apk ( for android ) p...
Write SMS by voice PRO ( for android )
Wix-dvd- ripper ခွေကူးလို့မရရင် ရအောင်လုပ်ပေးမဲ့ေ...
Tawwinminntharlay Software Collection လေးပါ
ကွန်ပျူတာ Desktop Shortcut Icon အားလုံး တူနေခြင်း ...
HTML Element များ
မိန်းကလေးများအတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း ( For And...
android ဖုန်းတွေမှာ touch screen သေနေတာကိုပြင်မယ်။...
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ WinRAR Password ဖြေကြမယ်...
Upload Speed မြှင့်တင်နည်း (မြန်မာလို Ebook)
ရွှေမြန်မာအတွက် ဆီးဂိမ်းသတင်း နှင့်အမှတ်စရင်း SEA G...
Drum အသံလုပ်ချင်သူများအတွက် Electrum Drum Machine...
Windows XP ချစ်သူများအတွက် Go Launcher Ex Theme Wi...
Facebook လော့ချချင်သူများအတွက် Facebook Lock v.2.3...
Android သုံးတဲ့ မြန်မာတွေ အသုံးများတဲ့ 1st Myanmar...
မြန်မာ Browser ဖြစ်သော Mogok v3.1 IPA (iPhone/iPod...
ရေဒီယို နားထောင်လို့ရမယ့် MYMC Radio v.1.0 APK
Whats App ကလေးပါ အရမ်းမိုက်တယ်နော်...ပုံတွေ ဗွီဒီ...
Google ရဲ့ service အသစ်ဖြစ်တဲ့ website များတွင် ထည...
မြန်မာ့ကွန်ယက်အသစ် SQUAR v0.946 ထွက်ပြီ (နောက်ဆုံး...
PhotoShop Dress ( for PC )
ဖုန်း ဆခရင် လော့ကာ For Android အန်းဒရိုက်ဖုန်း အတွ...
Creating Blog Borders ( ဘလော့စ်တစ်ခုလုံးဘောင်ခတ်မယ...
Fancy facebook floating widget for blogger
How To Add Rotate Effect With Drop Shadow In Blogg...
Google play store ကိုကျော်ခွဝင်ချင်သူများအတွက် ( ဖ...
Adobe Photoshop Keygen (CS 3, 4, 5, 6)
Skype - free IM & video calls v4.4.0.31835 APK (LA...
ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူများအတွက် Myanmar Bible 1.0 IPA ...
လှပသော Template များစုစည်းမှု ( For Blogger)
$1.99 ပေးရပြီး phone ကို clean လုပ်ပေးသော 1Tap Cle...
၂၄ ပစ္စည်း၊အသံထွက်နှင့် အခြားများပါဝင်သော MM Hub Pa...
သင့်ကွန်ပြူတာအတွက် Driver Booster ရှိတယ်
Android Device တွေမှာ boot animation ကို ပြောင်းကြ...
ရွှေဒေသ-သတင်း V-1.0 ဖြန့်ချိခြင်း APP အလန်းလေးတစ်ခု...
Zuma တို့ Luxor တို့လိုပဲ ဘောလုံးပစ်တဲ့ Marble Leg...
Internet Download Manger Build2+ Patch (FULL Ver...
facebook ရဲ့ account setting အကြောင်းအပိုင်း ( ၁ )...
Call Blocker လေးပါ
အင်္ဂလိပ်လို Chat မယ်၊ရေးမယ်၊ပြောကြမယ် pBot.apk
Tango v3.1.62450 apk (နောက်ဆုံးထွက်)
Battery အားကောင်းစေဖို့ Battery Master - Battery ...
Mobile Phone battery အကြောင်း
Apple store တွင် $6.99 ပေးရသော Minecraft – Pocket ...
Mobile Phone Battery တို့၏လျို့ဝှက်ချက်များ
ဘိုလင်းဝါသနာအိုးအတွက် 3Dဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ Crazy Bo...
OX FORD Dictionary လေးပါ
Shortcut Virus Remover တဲ့ဗျာ
သီချင်းတွေမှာပုံထည့်တဲ့MP3 tag v2.53
အလွယ်ကူဆုံး Add Elemic Green Menu ( အစိမ်းရောင် )န...
$1.99 ဖြင့်ရောင်းသော Pou .ipa (iPhone/iPod/iPad ga...
Blue Screen Error မဖြစ်ရလေအောင် ကာကွယ်နည်း
Typing လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ သရဲတွေကို ရှင်းလင်းမယ် (Ful...
Root လုပ်ထားသောဖုန်းများအတွက် အထောက်အကူပေးတဲ့ Root...
websites blogger တွေအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ ကုတ်လေးမျ...
Root မလိုဘဲ file ရှာနိုင်မယ့် ES File Explorer Fil...
Apple store တွင် $0.99 ပေးရသော MMkeyboard 1.3.2 .i...
Android phones တွေပေါ်မှာ Google Account ကိုဖျက်ချန...
Facebook အကောင့်ဖွင့်နည်း (ဖုန်းနံပါတ်မလို ၊ ဖုန်း...
Facebook v3.9-dev Build 454116
ကွန်ပျူတာမှာလဲဖိုင်တွေကိုမြန်မြန်ကူးလို့ရပီ Super ...
နိုင်ငံတကာနေ့စဉ်ပျံသန်းနေကြတဲ့ လေယဉ်ခရီးစဉ် သိချင...
2G ကနေ 3G ပြောင်းချင်တဲ့သူများအတွက် Manage Network...
Black Mart v0.99.2.44
Keyboard ဟာ ကွန်ပျူတာထဲကို အချက်အလက်များထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ခလုတ်လေးများပါဝင်ပါတယ်…
Alt+F4 နှိပ်လျှင် မိမိဖွင့်ထားသော Windows ကို ပိတ်သည့်အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်..
မည်သည့် Windows မှ ဖွင့်မထားပဲ Alt+F4 ကို နှိပ်လျှင် Shut Down Dialog Box ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Backspace Key ဟာ Cursor ရဲ့ ဘယ်ဖက်မှာရှိတဲ့ စာလုံးကို ဖျက်သည့်အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်…
Delete Key ကတော့ Cursor ရဲ့ ညာဖက်မှာရှိတဲ့ စာလုံးကို ဖျက်သည့်အခါ သုံးနိုင်ပါတယ်…
Windows key ကို နှိပ်ရင် Start menu ကို ဖွင့်လိုက်တာပါ…
Ctrl နဲ့Alt Key များဟာ တခြား Key များနဲ့တွဲနှိပ်ခြင်းဖြင့် အသုံးဝင်သော Command များ ပေးနိုင်ပါတယ်…
Ergonomic Keyboard ဟာ စာရိုက်တဲ့အခါ လက်ကောက်ဝတ်အနေအထားကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားတာပါ…
မိမိလက်အနေအထားကို Keyboard မကြည့်ပဲ ထားနိုင်ရန် F နဲ့J Key တို့ တွင် အဖုလေး ပြုလုပ်ထားပါတယ်…
၂။ Start&gt;&gt;&gt;All Program&gt;&gt;&gt;Accessories&gt;&gt;&gt;Paint ကို ဖွင့်လိုက်ပါ…
၃။ Edit Menu ကို နှိပ်ပြီး Paste ပြုလုပ်ပါက မိမိ Monitor Screen ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်…
၄။ File&gt;&gt;&gt;Save as ကို နှိပ်ပြီး Save as type မှာ JPEG နဲ့သိမ်းပါ… Bitmap Image အနေနဲ့ သိမ်းလျှင် File Size ကြီးပါတယ်…
Paint တွင် Paste ပြုလုပ်ကြည့်ပါက Windows ကိုသာ Print ပြုလုပ်သွားပါမယ်…
မူရင်း.. www.fivethreeworld.net &amp; မြန်မာအိုင်တီ လူငယ်များ မှ ပြန်လည်ဖော်ပြသည်
Android Phone က Incoming & Outgoing Network Connections တွေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမယ်
Download Network Connections from Dropbox or Google Play Store
posted by Soe Win Naing
android phone တွေအတွက် Mon Font & Mon Keyboard
သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Mon Font & Mon Keyboard သုံထားတဲ့ ဖုန်းတလုံးက ဘာသာစာ/စကား (၂) မျိုးစလုံးကို ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် samsung galaxy ဖုန်း setting မှာ display , font style ပါသော ဖုန်းမှတာ အသုံးပြု လို့ရနိုင်မှာပါ တခြားဖုန်းအမျိုးစားတွေတော့ အသုံးပြုလို့ မရနိုင်ပါ ။။။
လိုအပ်ရင် အောက်မှာ စွဲစိလိုက်ပါ ။။။
သုံးခုလုံးဒေါင်းပီး install လုပ် နိုင်ပါပြီး။။။
>>>>>download Hi Mon UniMon Font<<<<<
>>>>>download Hi Mon 1<<<<<
>>>>>download Hi Mon Keybroad<<<<<
Write SMS by voice PRO ဆော့ဝဲးကတော့ စာရေးရပျင်းတဲ့ ကိုကို မမတွေအတွက် (ဥပမာ.. နော်နော် လိုမျိုးတွေပေါ့) သေချာပေါက်အဆင်ပြေမှာပါ။။။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီကောင်လေးက ကိုပြောတဲ့စကားတိုင်းကို တလုံးမကျန် auto ပြန်ရေးပေးနိုင်တယ်လေ။။။။ပြောတဲ့အတိုင်း အသံထွက်လည်းမှန်တယ်။။။။ ဘာသာစကားများစွာ ကို ပြောနိုင်ပါတယ်။။ ပြောပီးရင် ပေါ်လာတဲ့စာကို ပို့ချင်တဲ့သူဆီ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။။။။
playstore link ပိုက်ပိုက်ပေးရတယ်နော်
>>>>>>>download Write SMS<<<<<<<
Wix-dvd- ripper ခွေကူးလို့မရရင် ရအောင်လုပ်ပေးမဲ့ ဆော့ဝဲလ်
ကျွန်တော်တို့ အခွေတွေကိုကူးတဲ့အခါမှာ တချို့အခွေတွေကိုဆိုရင်ကူးလို့မရအောင်လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။
အဲ့လိုမျိုး အခက်ခဲတွေကြုံနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ဒီ software လေးဆောင်ထားရင် အေးအေး ဆေးဆေးပဲပေါ့ဗျာ။
ဒီကောင်လေးကိုသာ install လုပ်ပေးလိုက်။ ကြိုက်တဲ့ ခွေလာ ကူးပြီးသားပဲဗျ။ သုံးချင်ရင်တော့ အောက်က link တွေကနေ download လုပ်နိုင်ပါပြီဗျာ။
>>>>>>Download Wix-dvd- ripper<<<<<<
ဒါကတော့ ချစ်သူရှိတဲ့ စုံတွဲတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့အရာပါ။ ဗေဒင်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် အထူးကောင်းစေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ပိုပြီး သိချင်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က ချစ်သူမရှိသေးတဲ့အတွက် မစမ်းသေးပါဘူး။ ချစ်သူရှိသူတိုင်း အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ရော့ မယုံရင်သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပါ။
ဤအသုံးချပရိုဂရမ်တွင် လူသားတိုင်းနှင့် သက်ဆ်ိုင်သော အချစ်ကို တွက်ချက်ပေးမယ့် အချစ်ဗေဒင် ဆော့လ်ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုချစ်ရေးဆိုထားသော သူ၏ အမည်ကို သိရုံဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဤအသုံးချပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့၏ အချစ်ရေးကို ပျော်ရွှင်စွာ တွက်ချက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီလည်းခံ လိုင်းလည်းမြန် ဖုန်းလိုင်းလည်းပိုမိုမိစေတဲ့ဆော့ဝဲ
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Portable, ကွန်ပြူတာ Software
ဒီ Software Collection ကလေးကို ကျနော် တစ်ရက်နီးပါးလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ လုပ်လိုက်ရပါတယ် အထဲမှာ
တကယ်ရှားပါးပြီး အဖိုးတန်တဲ့ Software ကောင်းလေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီးတော့ ထည့်ပေးထားပါတယ် လုပ်ပြီးပြီးချင်း
ကျနော် တင်ကြည့်တယ် ကွန်နရှဲန်မကောင်းတော့ Upload လုပ်တာ ခနခနကို ပျက်တယ်ဗျာ ခက်ခက်ခဲခဲလေးကို
>>ံအိမ်ဒီဇိုင်းဆွဲချင်သူများအတွက် Home Plan
>>စီဒီအခွေတွေပေါ်မှာ Cover Desing ရေးဆွဲလိုသူများအတွက် CD Lable Desingner
>>အမ်ပီသရီးသီချင်းတွေပေါ်မှာ ကိုယ့်ရုပ်ပုံလေးထည့်ချင်သူများအတွက် MP3tag
>>ဖုန်းထဲက Software တွေကို ကွန်ပြူတာမှာမြင်ချင်သူများအတွက် APK Viewer
>>ရုပ်ပုံအရှင်တွေကို Windows 7မှာ ကြည့်ချင်သူများအတွက် Gif Wiewer
>>ကွန်ပြူတာမှာ Format အစုံနဲ့ Video ကြည့်ချင်သူများအတွက် KMPlayer
>>Windows7မှာ Logon နောက်ခံလေးပြောင်းချင်သူများအတွက် Windows7Logon -
>>အင်္ဂလိပ် မြန်မာ မြန်မာအင်္ဂလိပ်၂မျိုးသုံးချင်သူများအတွက် Eng-Mm-Eng Dictionary
>>ဂျီတော့မှာ အသေအကြေ ချက်ချင်သူများအတွက် Google Talk
>>Windows7မှာတစ်ချို့နေရာတွေမှာအသံလိုအပ်နေသူများအတွက်
>>ဗီဒီယိုတွေ ဓာတ်ပုံတွေစသည်ကို စိတ်ကြိုက် Format ပြောင်းချင်သူများအတွက် Format Factory
>>ဗီဒီယိုတွေကို စိတ်ကြိုက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ဖြတ်တောက်ချင်သူများအတွက်
ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်၊ ကဲဗျာ ကြိုက်တဲ့သူတွေ ကြိုက်သလိုဖြန့်ဝေပေးနိုင်ကြပါတယ်ဗျာ ဘာခရက်ဒစ်မှ ပေးစရာမလိုပါဘူးဗျ.......
ကွန်ပျူတာ Desktop Shortcut Icon အားလုံး တူနေခြင်း ပြဿနာ
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge For Computer, Window နည်းပညာ, Window အတွက်
Player, Adobe Reader ,iTunes ,PD F , Excel. lnk,Word စ,တဲ့ Icon တွေချည်း
(or) Click Here to Download
HTML document တွေကို HTML element တွေဆိုပြီ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
HTML element ဆိုတာက start tag နဲ့ end tag ကြားက အရာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
<p> ဒါက စာပိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ </p>
<a href="default.htm"> လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ </a>
<br /> ရေပြင်ညီ မျဉ်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် End Tag မရှိပါ။
* Start tag ကိုတစ်ခါတစ်လေမှာ opening tag လို့လဲခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ End tag ကိုတော့ closing tag လို့ခေါ်ပါတယ်။
HTML element တစ်ခုကို start tag / opening tag နဲ့အစပြုပါတယ်။ end tag / closing tag နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်။
element မှာပါဝင်တဲ့ အရာ content တွေကတော့ start နဲ့ end tag ကြားကအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့တဲ့ HTML element တွေမှာဗလာ empty content ပဲပါပါတယ်။
Empty element တွေကို start tag နဲ့ပိတ်ထားပါတယ်။
HTML element အများစုမှာ Attribute တွေ ပါနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် — Attribute တွေအကြောင်းကို နောက်လာမယ့်အခန်းမှာ သင်ရပါမယ်။
HTML Element အတွဲများ (Nested)
HTML element တွေဟာ အတွဲလိုက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (အခြား HTML element တွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်)။
HTML document တွေမှာ HTML element အတွဲတွေပါရှိပါတယ်။
HTML Document ဥပမာ
<p>ဒါက ပထမ စာပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။</p>
အပေါ်က ဥပမာကို ကြည့်ရင် HTML element ၃ ခုပါတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
<p> element က HTML document မှာရှိတဲ့ စာပိုဒ်ကို သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဒီ element မှာ start tag <p> တစ်ခုနဲ့ end tag </p> တစ်ခုပါပါတယ်။
element မှာပါဝင်တဲ့ အရာ — ဒါကပထမစာပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
<body><p>ဒါက ပထမစာပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။</p> </body>
<body> element က HTML document ရဲ့ ကိုယ်ထည်ဖြစ်တဲ့ Body ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။
element မှ start tag <body> တစ်ခုနဲ့ end tag </body> တစ်ခုပါပါတယ်။
ဒီ element မှာ အခြား HTML element တစ်ခုပါပါတယ်။ (<p> element တစ်ခုပါတာကို ဆိုလိုပါတယ်)။
<html> element က HTML document တစ်ခုလုံးကို သတ်မှတ်ပါတယ်။
element မှ start tag <html> တစ်ခုနဲ့ end tag </html> တစ်ခုပါပါတယ်။
ဒီ element မှာ အခြား HTML element တစ်ခုပါပါတယ်။ (<body> element တစ်ခုပါတာကို ဆိုလိုပါတယ်)။
End Tag ကိုမမေ့ပါနဲ့
တစ်ချို့တဲ့ HTML element တွေဟာ သင့်အနေနဲ့ end tag ထည့်ဖို့မေ့ခဲ့ရင်တောင် အမှား ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေနေမှာပါ။
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ ဥပမာကို browser (ဘရောက်ဆာ) အများစုက အမှားမပြပဲလက်ခံပါတယ်။ closing tag ကဒီနေရာမှာ အရေးမကြီးလို့ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုတော့အမြဲမလုပ်သင့်ပါဘူး။ HTML element အများစု end tag မေ့ခဲ့ရင်တော့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အမှားတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
HTML Element အလွတ်များ (Empty)
HTML element တွေရဲ့အထဲမှာ ဘာမှမပါရင် empty element တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။
<br> ဆိုတာက Empty element တစ်ခုဖြစ်ပြီး closing tag မပါပါဘူး။ (<br> tag ကအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းဖို့ line break အဖြစ်အသုံးပြုကြတာပါ)။
မှတ်ချက် — Closing Tag မပါဘူးဆိုတာ အပိတ်မပါတာနဲ့ မတူပါဘူး။ </br> ဆိုတာမျိုးမရှိတာကို ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲသလိုမပါတဲ့အတွက် သူ့မှာ ထူးခြားချက်လည်း ရှိပါတယ်။ (/) မျဉ်းစောင်းတစ်ခုကို နောက်မှထည့်ပေးရပါတယ်။ XHTML မှာ element အားလုံးမှာ အပိတ်ပါရပါမယ်။ start tag မှာ အခုလိုပုံစံမျိုး <br /> မျဉ်းစောင်းလေးထည့်လိုက်တာဟာ XHTML နဲ့ XML အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ End Tag တော့မရှိပါဘူး။
HTML မှာ အသေးစာလုံးတွေကိုသာသုံးပါ။
HTML tag တွေဟာ စာလုံးအကြီးအသေး လွဲလို့သိပ်ပြဿနာမရှိတဲ့ အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Case Sensitive တွေမဟုတ်ပါဘူး — <P> က <p> နဲ့အတူတူပါပဲ။ ဝဘ်ဆိုဒ် အများအပြားက စာလုံးအကြီးနဲ့ uppercase HTML tag တွေကိုသုံးကြပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ စာလုံးအသေးနဲ့ပဲသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ World Wide Web Consortium (W3C) က HTML4မှာ စာလုံးအသေးကိုသုံးဖို့ တိုက်တွန်းထားပြီး XHTML အတွက်ကတော့ စာလုံးအသေးပဲလက်ခံလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Additional protection for your computer , 100 % compatible with other antivirus !
Most antivirus software can not be installed with other antivirus , it is because the antivirus is designed for primary protection on your computer . Unlike the SmadAV , isatype of antivirus SmadAV are designed as additional protection , so 100 % compatible and can work well although there has been another antivirus on your computer , in this case SmadAV serves asasecond line of defense.
SmadAV has its own way (behavior , heuristic , and whitelisting ) in detecting and cleaning viruses that will further enhance the security on your computer . Because the resource usage is very small SmadAV , SmadAV will not increase your computer's performance under heavy use. So , withamix between SmadAV and antivirus protection that is installed on your computer will further strengthen the defense of your computer from virus infection .
SmadAV also able to clean the virus that has infected your computer and repair registry altered by the virus . Other antivirus usually not done cleaning the registry so that the computer has not returned to normal after cleaning the antivirus. Many supporting tools that are included in SmadAV asaweapon for cleaning the virus .
Note : Not all types of viruses can be cleaned SmadAV , SmadAV is still not able to clean the virus type or types of rootkits penginfeksi program ( eg virus Ramnit , Sality , Alman , Virut , etc. . ) Because this strain has blown most of your program files . Our focus at this time is due to the type of virus clearance in addition to the two types ( eg : virus WormShortcut , Cervical , MSO , Brontok , etc. . )
You will have to register for free account when you download more than 1 GB size files in "Davvas.com".
Because Davvas allow only registerd user to download more than 1 GB files.
But don't worry for register, that is very easy. Click on Sing up and fill in reg form.
No need to fill "Payment info" and "Coupon code" for free user. They are only for preminum user.
If you have registered in "Davvas", now you can download5GB per file.
IF you download in Tusfiles , you will have to uncheck "download with TusFiles accelerator and get recommended offers".
မူရင်းဆိုက်ဒ်ကလေးက http://www.bloggerkoyan.com/ ဖြစ်ပါတယ်ခပ်ဗျ.
မိန်းကလေးများအတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း ( For Android) (13.9MB)
မိန်းကလေးများအကြိုက် အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်း မြန်မာလို application လေးဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း၊ စနစ်တကျ မျက်နှာသစ်နည်း၊ မျက်နှာ အသားအရေကို တင်းရင်းလှပစေမည့် မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းလျှို့ဝှက်ချက် တွေပါဝင်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက်လည်း ပါတယ်နော်။ အားလုံးပဲကြိုက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ဖုန်းထဲ ထည့်သွင်းထားရုံနဲ့ သွားလေရာ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Android Version 2.2 နှင့် အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
android ဖုန်းတွေမှာ touch screen သေနေတာကိုပြင်မယ်။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Knowledge For Android
Android ဖုန်းတွေမှာ software dead ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.......? ပညာပေးသပ်သပ်လေးပါ အချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားမဆို welcome ပါ ............. odin ကိုအသုံးပြုပြီး power failure, software fault, disconnection ဖြစ်နေတာစသည်ဖြင့်ဖုန်းသေနေတာတွေ ကိုငွေကုန်ကြေး ကျမရှိပဲ ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ဟဲဟဲ ဖုန်း တိုင်းတစ်နေ့ ဒီပုံလေး လိုပဲေိေိ ( နောက်တာပါ ) သိထားရင်တော့ မှားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး ။တော်ရုံတန်ရုံ နေမကောင်း နှာစေးချောင်းဆိုး ဖြစ်တာလောက်ကိုတော့ odin တစ်ခုသုံးပြီးဘယ်လို လုပ်မယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ သင့် ဖုန်းဟာ အလုပ်မလုပ်တော့ ဘူးဆိုရင် အရင်ဆုံး odin နဲ့ ချိန်ကြည့် ပါ။ဖုန်းက odin ကိုသိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့ ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ ရပါတယ်။
မိတ်ဆွေဖုန်းဟာ samsung ဖုန်းအမျိုးအစား series တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ သပ်သပ်လေ့ လာပါ။
အခြားဖုန်းများရော samsung model အနိမ့် တွေအတွက်ကတော့ဒီမှာ မိမိနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ အမျိုးအစား odin ကိုရွေးပါ။ အကြံပြုချင်တာတော့ODIN Version 4.42 အထက်ကိုအရင်သုံးကြည့် ပေးပါ။
ODIN Multi Downloader ကိုရလာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကအတိုင်းအဆင့် ဆင့် လုပ်ပေးပါ။
Odin multi downloader ကို PC မှာ Run ပါ။
download mode ကိုဝင်ဖို့ အတွက် Volume Down + Home + Power ကိုနိုပ်ပြီး ဝင်ပါ။
ဖုန်းက download mode ထဲကိုဝင်ပြီဆိုရင် usb ကြိုးကိုအသုံးပြုပြီး pc နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
Odin မှာ connect ပြရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျာအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျာ။
အခြား odin တွေအသုံးပြုလို့connect မပြလျှင် Odin v4.42 ကိုသုံးကြည့် လို့ မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် မိမိနှင့် ကိုက်ညီမဲ့ odin ကိုရွေးပြီးဒီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ကြည့် ပါ။
နောက်ထပ် ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြပေးမည့် နည်းလမ်းများ
Odin Downloader v1.7, v1.81 and v1.82.ကိုအသုံးပြုပြီးဖုန်းသေနေတာကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နည်း
Odin Downloader v3.98 နှင့် အထက်ဖုန်းများအတွက်နည်းလမ်း
- Usb JIG method ကိုအသုံးပြုပြီးဖုန်းတစ်လုံးကို ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နည်း
One click method ကိုအသုံးပြုပြီးဖုန်းတစ်လုံးကို ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နည်း
WinRAR Password ကို online ကနေပြီး ဖြေလို့ရပါတယ် တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ပြသွားပါ့မယ်.
အရင်ဆုံး ကိုယ် password ဖြေချင်တဲ့ file ကို .rar ကနေ .zip ကိုအရင်ပြောင်းပါ...
ပြောင်းပြီးသွားရင် ဥပမာ .. အရင်ကHuawei Network Unlock.rar ကနေ
Huawei Network Unlock.zip ဖြစ်သွားတာပေါ့... ။
ဒီနေရာကို click လုပ်ပါ။
Browse ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ပြောင်းထားတဲ့ Huawei Network Unlock.zip ကိုရွေးပေးပါ။
ပြီးရင် Convert file ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့ရမယ်...
file size ပေါ်မူတည်ပြီး ခဏတော့စောင့်ရပါတယ် ပြီးသွားရင် အောက်ကပုံအတိုင်း download
ဒေါင်းပြီးသွားရင် Password ရှိမရှိကို ကိုယ်တိုင်သာ ဖြေကြည့်ကြပါ...
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Android-IOS-Window